Fifanarahana miasa amin'ny rongony - Mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Mpisolovava amin'ny orinasa marijuana manana fahazoan-dàlana
Famolavolana ny fifanarahana miasa
Ny antony ilanao fifanarahana miasa rehefa manangona kapital ianao dia satria milaza amin'ny mpamatsy vola anao hoe inona no adidy ara-dalàna ataon'ny orinasanao, na tsy hatao. Ny fifanarahana fiasa dia manoritsoritra ny fomba hidinan'izy rehetra. Manomboka amin'ny fitantanana, hatramin'ny tompona vaovao, hatramin'ny fivoahana amin'ny fanananao, ny fandravana ny orinasa, ny zavatra rehetra.
Miovaova ny fifanarahana miasa amin'ny orinasa rongony
Efa nanao fifanarahana am-piasana marobe izahay, maro ho an'ny orinasa rongony. Matetika ny orinasa rongony dia mitaky fikarakarana fanampiny amin'ny famolavolana ny fifanarahana fiasan'izy ireo noho ny habetsaky ny vola sy ny vola maimaimpoana azon'izy ireo mandroaka mandritra ny asany. Noho izany, zava-dehibe ny famerenana sy ny fahafantarana ny fifanarahana fiasan'ny orinasa rongony. Ny fifampidinihana amin'ny mpisolovava iray efa za-draharaha amin'izy ireo ary mametraka fanontaniana mandra-pahafantatrao ny zava-drehetra momba ny fomba fiasan'ny orinasa rongony dia tokony ho dingana voalohany amin'ny fametrahana fifanarahana asa.
Amin'ny orinasa iray dia azonao atao ny manangana azy io mba tsy hifanome adidy ny mpikambana. Mitovy amin'ny - nataoko izany - niatrika izany. Mety ho ampahany amin'ny orinasa izany. Manana fifanarahana miasa izahay izay tianay hiantsoana ny fugghetaboutit - satria tsy vitan'ny hoe mamela anao hanana adidy faran'izay kely indrindra amin'ny mpiara-miasa aminao ianao raha resaka lalàna, fa ny fahalalahana handao ny orinasa amin'ny fotoana fohy, hamongorana ny raharaham-barotra ary avelao izany taloha. Io no LLC amin'ny fifanarahana rehefa zavatra kely fotsiny no azonao atao.
Avy eo azonao ny voaro yah, anaka - mpikambana tokana izany LLC - ny fifanarahana fampandehanana dia manome ny ampinga sy ny zavatra hafa kely. We nahita pejy vitsivitsy fotsiny izy ireo, saingy mahazo olona maro ianao ary mijery ny fifanarahana fandehanana mitombo amina pejy am-polony, angamba mihoatra ny 100 arakaraka ny fampirantiana mifatotra.
Avy eo izahay dia manana fifanarahana asa hafa tiako hiantsoana ny flip - ity orinasa ity dia eo am-panaovana iraka hamidy - ny LLC dia misy fivoahana ka saika amidy ianao hatramin'ny andro nidiranao raharaham-barotra araka ny fepetra napetraky ny fifanarahana miasa. Amin'ity endrika ity dia ampiasainay ny fehezan-teny tag-along-drag-along ho fehezin'ny fifanarahana fiasa mba hanomezana fiarovana an'ireo tompona orinasa vitsy an'isa ilay "tag along" mba "hisarihana" amin'ny famarotana feno ny orinasa , na amin'ny ankapobeny ny fananany rehetra. Ka azonao jerena, na ny tompona vitsy an'isa na ny tompona maro an'isa dia mifanaraka amin'ny zavatra hitranga rehefa tonga ny tolotra hividy.
Avy eo dia nantsoinay ny haren'ny taranaka - izay anananao ny orinasa afaka manana zon'ny fandavana aloha hitazona ny tompony - matetika ao anatin'ny orinasam-pianakaviana. Wicket miraikitra hidirana na hivoaka - ary izany no teboka.
Araka ny ahitanao ny fifanarahana fampandehanan-draharaha LLC dia malefaka loatra ka afaka mampifanaraka azy ireo amin'ny toe-javatra ilain'ny orinasanao - na dia ny fanarahana ny lafiny fitoviana ara-tsosialy sasany amin'ny lalàna rongony sasany.
Azonao atao ve ny mihazakazaka ny orinasa toy ny orinasa?
Raha jerena ny orinasa, ny fifanarahana miasa dia mampifangaro ny fifanarahana sy ny lalàna mifehy ny mpiara-miasa rehetra - fa raha ny teôria dia afaka manao lalàna misaraka - amin'ny teôria ny orinasa iray. Ary rehefa tonga eo amin'ny fihaonan'ireo karazan'orinasa orinasam-pandraharahana roa samy hafa ananany izahay dia afaka mamaly ny fanontaniana ihany amin'ny farany, azo tanterahina toy ny orinasa ve ny orinasa iray?
Azonao atao ny mahita an'izany - eny, afaka manangana orinasa toa azy ianao fa orinasa iray - saingy ho lafo lavitra noho ny fifanarahana miasa an'ny mpikambana tokana ao amin'ny orinasa LLC. Ny fifanarahana fampandehanan-draharaha dia tsy maintsy manambatra ny fifanarahana momba ny tompona vaovao, ny karazana tompona, ny tompon'andraikitra ary ny talen'ny fitantanana, ny zon'ny mpifidy, ny vokany amin'ny hetra - zavatra maro.
Fehiny momba ny Fifanarahana Operates LLC
Ka maninona raha manomboka amin'ny orinasa iray fotsiny? Azonao atao, saingy manana fombafomba lehibe kokoa izy ireo, tsy dia manovaova, ary mora ny fifanakalozana ny anjaranao. Ny orinasa iray dia mety ho lasa orinasa - ka raha ny 5 taona voalohany no antenaina ho ianao sy ny ekipanao voalohany hiasa amin'ny orinasa alohan'ny hikarakarana azy sy amidy, na iza no mahalala. Avy eo ianao dia afaka manomboka manangana orinasa araka izay tratry ny anananao, fa mindrana ny fahalalahana sy ny tsy fisian'ny fombafomba izay ananan'ny LLC, miampy fahazoana fameperana bebe kokoa, hitazomana ny ekipanao mandra-pahafatinao ho tonga feno amin'ny orinasa mifarana. mivarotra amin'ny stock - ny orinasa iray dia mbola afaka mividy orinasa iray.
Ny fifanarahana fampandehanana dia manazava ny fomba fitantanana ny orinasanao, ny fomba ahatongavan'ireo tompona vaovao amin'ny asa aman-draharaha, ny fomba fandaozan'ny tompony ny orinasa, sy ny maro hafa.
Inona avy ireo singa ao amin'ny fifanarahana miasa amin'ny orinasa rongony?
Fifanarahana miasa, ho an'ny orinasa rehetra - tsy ny orinasa rongony ihany - dia misy fizarana na lahatsoratra hafa. Toy ny toko ao anaty boky, ny lahatsoratra ao amin'ny fifanarahana fiasa dia mamaky ny fifanarahana ho zana-tsokajy lojika izay misy resaka manokana. Ireo fizarana mahazatra, na lahatsoratra, amin'ny fifanarahana asa ampiasainay dia misy:
• Fananganana orinasa
• Mpikambana sy singa
• Fitantanana ny orinasa
• Zo sy adidin'ny mpikambana
• Ny hetsiky ny mpikambana
• Fandraisana anjara amin'ny kaontin'ny orinasa sy ny kapital
• Fizarana, hetra ary fizarana
• Azo afindra
• Famoahana ny tombontsoan'ny mpikambana
• Famongorana sy famaranana
• Boky sy firaketana
• Famaritana samihafa
Fihaonana an-tampon'ny 100 Dr. Suite 100
Copyright 2021 © | Zo rehetra voatokana
Namboarina tamin'ny ❤ avy amin'i Babar Ali
Te hanana horonan-tsary fampahalalana momba ny indostrian'ny rongony?